မနျမာနိုငျငံရဲ့ ကိုဗဈကုသရေးကို အကွံပေးလိုကျတဲ့ အင်ျဂလနျရောကျ မွနျမာဆရာဝနျတဈဦး – Daily Feed MM
မနျမာနိုငျငံရဲ့ ကိုဗဈကုသရေးကို အကွံပေးလိုကျတဲ့ အင်ျဂလနျရောကျ မွနျမာဆရာဝနျတဈဦး
Royan Smith | October 17, 2020 | Knowledge | No Comments
၁။ Hotline လို့ အချေါမြားတဲ့ လူမှတျမိလှယျတဲ့ နံပါတျတခုလိုပါမယျ။ ယူကမှောဆိုရငျတော့ ၁၁၁ ကိုသုံးပါတယျ။ call handlers (ဖုနျးဖွသေူ) တှကေ ဆေးပညာ အခွခေံရှိပွီး၊ သငျတနျးတိုလေးတခုပေးထားပါတယျ။ သူတို့ကို
အကွံဉာဏျ ပေးနိုငျသူလဲရှိပါတယျ။ ဒီစနဈရဲ့ အကြိုးက လူနာနဲ့ထိတှမှေု့ (contact or exposure) မလိုဘဲ ဖုနျးထဲကတဆငျ့ လူနာကို ကိုဗဈ test လိုသလား၊ လိုရငျ အနီးအနားဘယျနရောမှာလုပျရမလဲ ဆိုတာတှရှောပွီး ဖုနျး
ပေါ့စတဈသမားတှေ ဘယျလောကျ နမေကောငျးဖွဈလဲပျေါမူတညျပွီး အိမျမှာဘဲ Q လုပျမလား၊Fever Clinic သှားရမလား၊ အရေးပျေါကတဆငျ့ဆေးရုံတကျရမလား အကွံပေးနိုငျတယျ။ တခွားဌာနတျောတျောမြားမြား
(ဆေးရုံ၊ အ‌ရေးပျေါလူနာတငျကား၊ ဂြီပီ၊ ဖီဗာကလငျးနဈ၊ lab, ရပျကှကျလူကွီး၊ ရဲ) နဲ့ခြိတျဆကျထား‌တော့ (emforcement) လူနာဘယျလောကျလိုကျနာမှူရှိသလဲပါ စဈလို့ရတယျ။ ဖုနျးဖွရေုံဘဲဆိုတော့ risk မြားတဲ့ ဗျောလံတီ
ယာတှပေါ ဝငျလုပျလို့ ရတယျ။ ပငျစငျစားဆရာတှေ၊ အသကျကွီးတဲ့ တခွားရောဂါရှိ့တဲ့သူတှေ ပါလုပျလို့ရနိုငျပါတယျ။
၂။ မလိုတာတှေ အားလုံးရပျရနျ
ဆေးဖွနျးတာသညျဘာမှ အသုံးမဝငျပါ။ နရေောငျခွညျသညျ အကောငျးဆုံးပိုးသတျဆေးပါ။ ဗိုကျတာမငျတှကေို ကာကှယျဆေးလို့မထငျကွပါနဲ့။ ဗိုကျတာမငျ C နဲ့ D ကိုတော့ အလှနျအကြှံမဟုတျရငျသောကျနိုငျပါတယျ။
ဆေးသှားဝယျရငျး ကှမျးယာဆိုငျမှာ ရောဂါကူးတာမြိုး မဖွဈရငျပွီးတာပါဘဲ။
၃။ Outbreak ဖွဈလာခဲ့ရငျ Positive အားလုံး ဆေးရုံ (သို့) facility Q မလိုသလို လုပျလဲ မလုပျနိုငျတော့ပါ။ အားလုံးတမြိုးတညျး (one size fits all) ပျေါလစီ အစား တဦးခငျြး အဆငျပွမေယျ့ လမျးညှနျခကျြ (guideline on
how to manage patients by individual basis) လိုပါမယျ။
၄။ ကိုဗဈဖွဈသူအမြားစုက နကေောငျးနတေတျတယျ။ ကောငျးကောငျးစား၊ ကောငျးကောငျးအိပျ၊ ‌ရမြေားမြားသောကျရုံကလှဲ ဘာမှမလိုပါ။ ကိုယျ့အိမျမှာ ဘယျသူနဲ့မှ မရောဘဲနတောအကောငျးဆုံးပါ။ ရနျကုနျတိုကျခနျးတှေ
လို သိပျပွှပျသိပျနရေငျတော့ facility Q လိုကောငျးလိုနိုငျပါတယျ။
၄။ နမေကောငျးတျောတျောဖွဈလာရငျတော့ ဆရာဝနျပွဖို့လိုပါပွီ။ ယူကမှောတော့ဒီနရောမှာ ၄ အုပျစုခှဲလိုကျပါတယျ။ လူကလဲ သာမနျအားဖွငျ့ကနျြးမာ အဆုတျယောငျရောဂါလဲမရှိ၊ သှေးပေါငျ အောငျစီဂငျြ Level တှလေဲ
ကောငျးဆိုရငျ အိမျပွနျလှတျပါတယျ။ ပိုဆိုးလာရငျဆေးရုံပွနျလာပေါ့။
ဒုတိယ အုပျစုကတော့ အဆုတျယောငျ‌ရောဂါရှိနပွေီဖွဈသျောလညျး၊ ကနျြတာအားလုံးကောငျးတယျ (သို့မဟုတျ) အဆုတျရောငျရောဂါမရှိပမေယျ့ ရောဂါအခံရှိတယျဆိုတဲ့သူတှပေါ။ သူတို့ကိုတော့ ဝါရငျ့ ဆရာဝနျတယောကျ
က စဈဆေးပါတယျ။ အားလုံး မဆိုးဘူး stable ဖွဈတယျဆို ခုံတဈလုံးမှာထိုငျထ ငါးမိနဈလုပျခိုငျးတယျ။ အောကျစီဂငျြထိုးကသြှားရငျဆေးရုံတငျ၊ မကရြငျအိမျပွနျလှတျပါတယျ။ တတိယအုပျစုကတော့ အဆုတျ‌‌ယောငျ
ရောဂါလဲရှိ၊ ရောဂါအခံလဲရှိဆိုသူတှပေါ။ သူတို့ကိုတော့ ဆေးရုံတငျကုဖို့လိုပါတယျ။ စတုတ်ထ အုပျစုကတော့ တဈခကျြကွညျ့ရုံနဲ့ သိသာတဲ့ အသညျးအသနျနမေကောငျးတဲ့ အုပျစုပါ။ ကြိနျးသပေေါကျ ဆေးရုံတကျဖို့လိုပွီး
ICU၊ အသကျရှူစကျ တှလေိုနိုငျပါတယျ။
၅။ ဆေးရုံပျေါမှာ ရောဂါပေါငျးစုံကူးနိုငျတယျ။ ခွခေငျးလကျခငျးမသာဘူး။ stress မြားတယျ။ လူနာမြားလာရငျ ကုတငျမလောကျတော့ ဆေးရုံတငျသငျ့တဲ့သူက ကြူသှား၊ ကောငျးတဲ့သူကဆေးရုံရောကျ ကမောကျကမတှဖွေဈ
၆။ တဆကျထဲပွောဖို့လိုတာက Positive ထှကျတဲ့သူကို သှားချေါရငျ ကမ်ဘာပျေါကို ပထမဆုံးရောကျလာတဲ့ ဂွိုဟျသားကိုသှားတှသေ့လိုမလုပျဖို့ပါ။ လုံးဝ မလိုအပျပါ။ အေးဆေးလုပျလို့လဲရပါတယျ။ ဘယျသူမှထှကျမပွေးပါ။
ပွေးမယျ့လူဆိုလဲ ဒါမြိုးလုပျရငျ ပိုတောငျပွေးခငျြဦးမယျ။
၇။ ဆရာဝနျ၊ ဆရာမ၊ စတေနာ့ဝနျထမျးတှကေို အထောကျအပံ့ ကောငျးကောငျးပေးပါ။ အနားယူခြိနျစီစဉျပေးပါ။ တခါတလေ ဖွဈတတျတာက လုပျတတျတဲ့သူ အလုပျကွိုးစားတတျတဲ့သူကို ပိုပို ခိုငျးမိတတျတယျ။ နဂိုထဲက
အလုပျလုပျတတျတဲ့သူဆို‌တော့ ပွနျမပွောဘဲ ကြုံးရုနျးလုပျတာ နောကျဆုံးပေါကျကှဲ ဒါမှမဟုတျ ပွိုကှဲ (breakdown) အလုပျထှကျ abscond လုပျတဲ့ အထိပါ။ ဘယျသူ့အတှကျမှမကောငျးပါ။
ဒါမြိုးရှောငျဖို့ ဆေးရုံအုပျက မြှမြှတတ တာဝနျခဖြို့လိုပါမယျ။ မြှမြှတတ ခဖြို့မပွောနဲ့ လူကိုမရှိတာ ဆိုတာလူတိုငျးသိပါတယျ။ အဲဒါနောကျပွောခငျြတဲ့တခကျြပါ။
၈။ ခုခြိနျမှာ တကမ်ဘာလုံး ဆရာဝနျ သူနာပွု အငျအားနညျးနပေါတယျ။ သနေိုငျတဲ့ ကူးစကျရောဂါအခြိနျမှာ ကနျြးမာရေးဝနျထမျးလုပျရတာ တှနျ့ဆုတျစရာပါ။ ဒါပမေယျ့ ယူကမှော စတေနာ့ဝနျထမျး ချေါလိုကျတော့
ပငျစငျယူပွီး ဆရာဝနျ တသောငျးကြျော သူနာပွု သုံးသောငျးကြျော ပွနျထှကျလာပွီး ကူကွပါတယျ။ လူကွီးတှဖွေဈတော့ အန်တရယျလြော့တဲ့နရောမှာတော့ထားရတာပေါ့။ သူတို့ဆီမှာ တဈပွညျလုံးက ကနျြးမာရေးလုပျသား
တှကေို (အနဲဆုံး ကိုဗဈကာလမှာ) လှိုကျလှိုကျလှဲလှဲ တနျဖိုးထားပါတယျ။
၉။ နောကျတခုက လူငယျတှကေို ချေါသုံးတာပါ။ ဒီမှာက year5ဆေးကြောငျသားတှဆေို ဆရာဝနျတပိုငျးဖွဈပွီးတျောတျော တတျနကွေပါပွီ။ သူတို့ကိုဖိတျချေါပွီးသုံးတာ ကိုဗဈကာလမှာသိပျထိရောကျပါတယျ။ ကိုဗဈရောဂါ
တဈမြိုးထဲကို ကုတတျအောငျသငျပေးရတာ သိပျမခဲယဉျးပါ။ မွနျမာပွညျမှာ အပွငျဆရာဝနျ ဂြီပီစတဲ့ လူငယျတှထေဲမှာ ကူညီခငျြသူအမြားကွီးရှိနိုငျပါတယျ။လူငယျတှေ ကနျြးမာသူတှဖွေဈတဲ့အတှကျ ကိုဗဈက ဖွဈရငျတောငျ
သကျသာတတျတော့ သတ်တိရှိသူ စိတျကောငျးရှိသူ အမြားကွီးထှကျလာနိုငျပါတယျ။ ဒီလိုဖွဈအောငျ့ ကွိုးနီစနဈလြော့ပေးဖို့တော့လိုမှာပေါ့။ အရေးပျေါ မဟုတျတဲ့ခှဲစိတျမှုမြိုးကိုရပျပွီး ထှကျလာတဲ့ကနျြးမာရေးဝနျထမျးတှကေို
redeploy လဲလုပျလို့ရပါတယျ။ ဒါတှဖွေဈလာဖို့ ဝနျကွီးဌာနကတော့ တျောတျော ထောကျပံ့ပေးရပါလိမျ့မယျ။
၁၀။ ကိုဗဈဦး‌ရမြေားလာတာနဲ့အမြှ covid contact သတျမှတျခကျြ definition ကိုပွောငျးရပါလိမျ့မယျ။ သို့မဟုတျရငျ အားလုံး PUIဖွဈပွီးဆေးကုပမေယျ့သူတောငျကနျြတော့မှာမဟုတျပါ။တဈခြိနျလုံးပွောငျးလဲနတေဲ့ ဗိုငျး
ရပျကို ကုရငျ ကိုယျကလညျး ပွောငျးစရာရှိရငျ မွနျမွနျဆနျဆနျ ပွောငျးတတျရမယျ။ ဥပမာ လူနာတယောကျ အဖြား ၁၀၀ ဒီဂရီ နဲ့ဝမျးလြှောပွီး ရောကျလာတယျဆိုပါတော့။ လူထုထဲမှာ ကူးစကျနှူနျး တဈသိနျးကို နှဈယောကျ
လောကျဘဲရှိရငျ ကိုဗဈကို မစဉျးစားသလောကျပါဘဲ။ ကူးစကျနှူနျး တဈသိနျးကို ၂၀၀ ရှိနပွေီဆိုရငျတော့ ကိုဗဈ ဖွဈနိုငျခွေ အတျောတိုးတကျသှားပါပွီ။
၁၁။ outbreak စတာနဲ့ အောကျစီဂငျြ ကုနျနှုနျးက ကွောကျစရာကောငျးပါတယျ။ အခုထဲက အောငျစီဂငျြ supply မြားအောငျကွိုပွငျကွပါ။ Ventilator မရှိလို့ လူနာသတော ဒီခတျေမှာ ဒီလောကျမဆနျးပါ (Intubation and
ventilation in Covid 19 is not that effective and outcomes are not that great. Its nature and outcome is very different from your garden variety ARDS) ။ အောကျစီဂငျြကုနျလို့ သရေတယျ (ဖွဈတတျတယျ၊
Ref – Dr.Aung Mon (UK)
မန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကိုဗစ်ကုသရေးကို အကြံပေးလိုက်တဲ့ အင်္ဂလန်ရောက် မြန်မာဆရာဝန်တစ်ဦး
၁။ Hotline လို့ အခေါ်များတဲ့ လူမှတ်မိလွယ်တဲ့ နံပါတ်တခုလိုပါမယ်။ ယူကေမှာဆိုရင်တော့ ၁၁၁ ကိုသုံးပါတယ်။ call handlers (ဖုန်းဖြေသူ) တွေက ဆေးပညာ အခြေခံရှိပြီး၊ သင်တန်းတိုလေးတခုပေးထားပါတယ်။ သူတို့ကို အြ
ကံဉာဏ် ပေးနိုင်သူလဲရှိပါတယ်။ ဒီစနစ်ရဲ့ အကျိုးက လူနာနဲ့ထိတွေ့မှု (contact or exposure) မလိုဘဲ ဖုန်းထဲကတဆင့် လူနာကို ကိုဗစ် test လိုသလား၊ လိုရင် အနီးအနားဘယ်နေရာမှာလုပ်ရမလဲ ဆိုတာတွေရှာပြီး ဖုန်းပေါ်က
ပေါ့စတစ်သမားတွေ ဘယ်လောက် နေမကောင်းဖြစ်လဲပေါ်မူတည်ပြီး အိမ်မှာဘဲ Q လုပ်မလား၊Fever Clinic သွားရမလား၊ အရေးပေါ်ကတဆင့်ဆေးရုံတက်ရမလား အကြံပေးနိုင်တယ်။ တခြားဌာနတော်တော်များများ (ဆေးရုံ၊
အ‌ရေးပေါ်လူနာတင်ကား၊ ဂျီပီ၊ ဖီဗာကလင်းနစ်၊ lab, ရပ်ကွက်လူကြီး၊ ရဲ) နဲ့ချိတ်ဆက်ထား‌တော့ (emforcement) လူနာဘယ်လောက်လိုက်နာမှူရှိသလဲပါ စစ်လို့ရတယ်။ ဖုန်းဖြေရုံဘဲဆိုတော့ risk များတဲ့ ဗော်လံတီယာတွေပါ ဝ
င်လုပ်လို့ ရတယ်။ ပင်စင်စားဆရာတွေ၊ အသက်ကြီးတဲ့ တခြားရောဂါရှိ့တဲ့သူတွေ ပါလုပ်လို့ရနိုင်ပါတယ်။
၂။ မလိုတာတွေ အားလုံးရပ်ရန်
ဆေးဖြန်းတာသည်ဘာမှ အသုံးမဝင်ပါ။ နေရောင်ခြည်သည် အကောင်းဆုံးပိုးသတ်ဆေးပါ။ ဗိုက်တာမင်တွေကို ကာကွယ်ဆေးလို့မထင်ကြပါနဲ့။ ဗိုက်တာမင် C နဲ့ D ကိုတော့ အလွန်အကျွံမဟုတ်ရင်သောက်နိုင်ပါတယ်။ ဆေးသွား
ဝယ်ရင်း ကွမ်းယာဆိုင်မှာ ရောဂါကူးတာမျိုး မဖြစ်ရင်ပြီးတာပါဘဲ။
၃။ Outbreak ဖြစ်လာခဲ့ရင် Positive အားလုံး ဆေးရုံ (သို့) facility Q မလိုသလို လုပ်လဲ မလုပ်နိုင်တော့ပါ။ အားလုံးတမျိုးတည်း (one size fits all) ပေါ်လစီ အစား တဦးချင်း အဆင်ပြေမယ့် လမ်းညွှန်ချက် (guideline on how
to manage patients by individual basis) လိုပါမယ်။
၄။ ကိုဗစ်ဖြစ်သူအများစုက နေကောင်းနေတတ်တယ်။ ကောင်းကောင်းစား၊ ကောင်းကောင်းအိပ်၊ ‌ရေများများသောက်ရုံကလွဲ ဘာမှမလိုပါ။ ကိုယ့်အိမ်မှာ ဘယ်သူနဲ့မှ မရောဘဲနေတာအကောင်းဆုံးပါ။ ရန်ကုန်တိုက်ခန်းတွေလို သိ
ပ်ပြွပ်သိပ်နေရင်တော့ facility Q လိုကောင်းလိုနိုင်ပါတယ်။
၄။ နေမကောင်းတော်တော်ဖြစ်လာရင်တော့ ဆရာဝန်ပြဖို့လိုပါပြီ။ ယူကေမှာတော့ဒီနေရာမှာ ၄ အုပ်စုခွဲလိုက်ပါတယ်။ လူကလဲ သာမန်အားဖြင့်ကျန်းမာ အဆုတ်ယောင်ရောဂါလဲမရှိ၊ သွေးပေါင် အောင်စီဂျင် Level တွေလဲကောင်း
ဆိုရင် အိမ်ပြန်လွှတ်ပါတယ်။ ပိုဆိုးလာရင်ဆေးရုံပြန်လာပေါ့။
ဒုတိယ အုပ်စုကတော့ အဆုတ်ယောင်‌ရောဂါရှိနေပြီဖြစ်သော်လည်း၊ ကျန်တာအားလုံးကောင်းတယ် (သို့မဟုတ်) အဆုတ်ရောင်ရောဂါမရှိပေမယ့် ရောဂါအခံရှိတယ်ဆိုတဲ့သူတွေပါ။ သူတို့ကိုတော့ ဝါရင့် ဆရာဝန်တယောက်က စ
စ်ဆေးပါတယ်။ အားလုံး မဆိုးဘူး stable ဖြစ်တယ်ဆို ခုံတစ်လုံးမှာထိုင်ထ ငါးမိနစ်လုပ်ခိုင်းတယ်။ အောက်စီဂျင်ထိုးကျသွားရင်ဆေးရုံတင်၊ မကျရင်အိမ်ပြန်လွှတ်ပါတယ်။ တတိယအုပ်စုကတော့ အဆုတ်‌‌ယောင်ရောဂါလဲရှိ၊ ရော
ဂါအခံလဲရှိဆိုသူတွေပါ။ သူတို့ကိုတော့ ဆေးရုံတင်ကုဖို့လိုပါတယ်။ စတုတ္ထ အုပ်စုကတော့ တစ်ချက်ကြည့်ရုံနဲ့ သိသာတဲ့ အသည်းအသန်နေမကောင်းတဲ့ အုပ်စုပါ။ ကျိန်းသေပေါက် ဆေးရုံတက်ဖို့လိုပြီး ICU၊ အသက်ရှူစက် တွေ
၅။ ဆေးရုံပေါ်မှာ ရောဂါပေါင်းစုံကူးနိုင်တယ်။ ခြေခင်းလက်ခင်းမသာဘူး။ stress များတယ်။ လူနာများလာရင် ကုတင်မလောက်တော့ ဆေးရုံတင်သင့်တဲ့သူက ကျူသွား၊ ကောင်းတဲ့သူကဆေးရုံရောက် ကမောက်ကမတွေဖြစ်တ
၆။ တဆက်ထဲပြောဖို့လိုတာက Positive ထွက်တဲ့သူကို သွားခေါ်ရင် ကမ္ဘာပေါ်ကို ပထမဆုံးရောက်လာတဲ့ ဂြိုဟ်သားကိုသွားတွေ့သလိုမလုပ်ဖို့ပါ။ လုံးဝ မလိုအပ်ပါ။ အေးဆေးလုပ်လို့လဲရပါတယ်။ ဘယ်သူမှထွက်မပြေးပါ။ ပြေးမ
ယ့်လူဆိုလဲ ဒါမျိုးလုပ်ရင် ပိုတောင်ပြေးချင်ဦးမယ်။
၇။ ဆရာဝန်၊ ဆရာမ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေကို အထောက်အပံ့ ကောင်းကောင်းပေးပါ။ အနားယူချိန်စီစဉ်ပေးပါ။ တခါတလေ ဖြစ်တတ်တာက လုပ်တတ်တဲ့သူ အလုပ်ကြိုးစားတတ်တဲ့သူကို ပိုပို ခိုင်းမိတတ်တယ်။ နဂိုထဲက အလုပ်
လုပ်တတ်တဲ့သူဆို‌တော့ ပြန်မပြောဘဲ ကျုံးရုန်းလုပ်တာ နောက်ဆုံးပေါက်ကွဲ ဒါမှမဟုတ် ပြိုကွဲ (breakdown) အလုပ်ထွက် abscond လုပ်တဲ့ အထိပါ။ ဘယ်သူ့အတွက်မှမကောင်းပါ။
ဒါမျိုးရှောင်ဖို့ ဆေးရုံအုပ်က မျှမျှတတ တာဝန်ချဖို့လိုပါမယ်။ မျှမျှတတ ချဖို့မပြောနဲ့ လူကိုမရှိတာ ဆိုတာလူတိုင်းသိပါတယ်။ အဲဒါနောက်ပြောချင်တဲ့တချက်ပါ။
၈။ ခုချိန်မှာ တကမ္ဘာလုံး ဆရာဝန် သူနာပြု အင်အားနည်းနေပါတယ်။ သေနိုင်တဲ့ ကူးစက်ရောဂါအချိန်မှာ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းလုပ်ရတာ တွန့်ဆုတ်စရာပါ။ ဒါပေမယ့် ယူကေမှာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ခေါ်လိုက်တော့ ပင်စင်ယူပြီး
ဆရာဝန် တသောင်းကျော် သူနာပြု သုံးသောင်းကျော် ပြန်ထွက်လာပြီး ကူကြပါတယ်။ လူကြီးတွေဖြစ်တော့ အန္တရယ်လျော့တဲ့နေရာမှာတော့ထားရတာပေါ့။ သူတို့ဆီမှာ တစ်ပြည်လုံးက ကျန်းမာရေးလုပ်သားတွေကို (အနဲဆုံး ကို
ဗစ်ကာလမှာ) လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ တန်ဖိုးထားပါတယ်။
၉။ နောက်တခုက လူငယ်တွေကို ခေါ်သုံးတာပါ။ ဒီမှာက year5ဆေးကျောင်သားတွေဆို ဆရာဝန်တပိုင်းဖြစ်ပြီးတော်တော် တတ်နေကြပါပြီ။ သူတို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးသုံးတာ ကိုဗစ်ကာလမှာသိပ်ထိရောက်ပါတယ်။ ကိုဗစ်ရောဂါတစ်
မျိုးထဲကို ကုတတ်အောင်သင်ပေးရတာ သိပ်မခဲယဉ်းပါ။ မြန်မာပြည်မှာ အပြင်ဆရာဝန် ဂျီပီစတဲ့ လူငယ်တွေထဲမှာ ကူညီချင်သူအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်။လူငယ်တွေ ကျန်းမာသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုဗစ်က ဖြစ်ရင်တောင် သက်
သာတတ်တော့ သတ္တိရှိသူ စိတ်ကောင်းရှိသူ အများကြီးထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်အောင့် ကြိုးနီစနစ်လျော့ပေးဖို့တော့လိုမှာပေါ့။ အရေးပေါ် မဟုတ်တဲ့ခွဲစိတ်မှုမျိုးကိုရပ်ပြီး ထွက်လာတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကို redeploy
လဲလုပ်လို့ရပါတယ်။ ဒါတွေဖြစ်လာဖို့ ဝန်ကြီးဌာနကတော့ တော်တော် ထောက်ပံ့ပေးရပါလိမ့်မယ်။
၁၀။ ကိုဗစ်ဦး‌ရေများလာတာနဲ့အမျှ covid contact သတ်မှတ်ချက် definition ကိုပြောင်းရပါလိမ့်မယ်။ သို့မဟုတ်ရင် အားလုံး PUIဖြစ်ပြီးဆေးကုပေမယ့်သူတောင်ကျန်တော့မှာမဟုတ်ပါ။တစ်ချိန်လုံးပြောင်းလဲနေတဲ့ ဗိုင်းရပ်ကို
ကုရင် ကိုယ်ကလည်း ပြောင်းစရာရှိရင် မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပြောင်းတတ်ရမယ်။ ဥပမာ လူနာတယောက် အဖျား ၁၀၀ ဒီဂရီ နဲ့ဝမ်းလျှောပြီး ရောက်လာတယ်ဆိုပါတော့။ လူထုထဲမှာ ကူးစက်နှူန်း တစ်သိန်းကို နှစ်ယောက်လောက်ဘဲရှိ
ရင် ကိုဗစ်ကို မစဉ်းစားသလောက်ပါဘဲ။ ကူးစက်နှူန်း တစ်သိန်းကို ၂၀၀ ရှိနေပြီဆိုရင်တော့ ကိုဗစ် ဖြစ်နိုင်ခြေ အတော်တိုးတက်သွားပါပြီ။
၁၁။ outbreak စတာနဲ့ အောက်စီဂျင် ကုန်နှုန်းက ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ အခုထဲက အောင်စီဂျင် supply များအောင်ကြိုပြင်ကြပါ။ Ventilator မရှိလို့ လူနာသေတာ ဒီခေတ်မှာ ဒီလောက်မဆန်းပါ (Intubation and
ventilation in Covid 19 is not that effective and outcomes are not that great. Its nature and outcome is very different from your garden variety ARDS) ။ အောက်စီဂျင်ကုန်လို့ သေရတယ် (ဖြစ်တတ်တယ်၊ြ
ဒူးနာ ခါးနာ ရောဂါသညျမြားအတှကျ အစှမျးထကျတဲ့ သဘာဝ ဆေးနညျး (၈) မြိုး
ယနခေ့တျေ လူငယျတှေ မသိကွတော့တဲ့ ဘိလပျမွနှေငျ့ သံခြောငျး တှကျနညျး
မွနေရောမလိုပဲ လတျလတျဆတျဆတျစားနိုငျမညျ့ ကနျစှနျးရှကျစိုကျပြိုးနညျး
ဝကျခွံကွောငျ့ စိတျညဈနတေဲ့ ပြိုပြိုမတေို့အတှကျ ဆောငျရနျရှောငျရနျ အခကျြလေးမြား